राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का लागि समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त ‘हात्तीको देखाउने दाँत’जस्तो मात्रै रहेको पार्टीका नेताहरूले बताएका छन् । जातिवाद, नातावाद र द्रव्यवादमा राजपा चुर्लुम्म डुबेको भन्दै उनीहरुले चिन्ता पनि व्यक्त गरेका छन् ।
राजपाको अध्यक्ष मण्डलसँग सबै अधिकार रहेको छ । अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले पार्टीलाई पार्टीको रूपमा बढाउन नचाहेर व्यक्तिगत चाहना भागबण्डाका अनुसार चलाउन खोजेको उनीहरूको भनाइ छ ।
अधिकार प्राप्तिका लागि राजपा सम्मिलित सबै पार्टीले समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउनका लागि आन्दोलन गरेका थिए । तर, पार्टीको आन्तरिक व्यवहार त्यस अनुरूप हुन नसकेको देखिएको छ । समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने कुनै विधि तयार भएको छैन । संविधान र कानुनलाई पालना गर्नुको साटो उल्लंघन गर्दै गएको देखिएको छ ।
अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूले पहिलो नाता कुटुम्ब, दोस्रो जाति र तेस्रो धन दिने स्रोतलाई ध्यान दिने गरेको आरोप कतिपयको छ । पार्टीका उपाध्यक्ष सत्यनारायण मण्डलले पार्टीमा जातिवाद, नातावाद र द्रव्यवादको समस्या रहेको बताएका छन् । आफ्नो फेसबुक वालमा उनले भनेका छन्, “राजपा नेपाल जातिवाद, नातावाद र द्रव्यवादमा मस्त भएको, समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तको उपेक्षा गरेको र तानाशाही प्रवृत्ति अंगीकार गरेकोले सबै मिलेर पार्टीको हितमा शुद्धीकरण गर्न अग्रसर होउँ ।”
त्यसो त ठूला राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि समस्या यस्तै देखिएको छ नि भनी सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उपाध्यक्ष मण्डलले भने, “राजनीतिको फोहरोलाई सफा गरी अगाडि बढ्ने कि फोहोरलाई थन्क्याउँदै जाने ? फोहोरलाई सफा गर्ने उपाय विधि हुन्छ । अरूले गलत गर्दै हामीले गलत गर्नु हुँदैन ।”
जातिवाद, नातावाद र द्रव्यवादले सही ठाउँमा सही व्यक्तिको छनोट हुन नसक्ने र यसबाट समाज र देशको भलो हुन नसक्ने उनले जनाए । पार्टी, पार्टी जस्तो नभएको पार्टीका सहमहासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाको पनि बुझाइ रहेको छ । उनले पनि अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूको मनलाग्दी व्यवहारबाट अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने बताए । निहित स्वार्थलाई पूरा गराउन अध्यक्ष मण्डलका केही सदस्यहरूले बहुमत–अल्पमतको खेल खेली चक्रीय प्रणालीको अभ्यास गरेदेखि पार्टी थप गलत व्यवहारको शिकार हुन पुगेको उनको बुझाइ छ ।
“पार्टीले यतिका दिनसम्म महन्थ ठाकुरलाई संयोजकमा रहन दिनु र अकस्मात् चक्रीय प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न खोज्नु पछाडिको जवाफ खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । गलत भएकोलाई गलत भन्न सक्नुपर्ने व्यवहार अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवहार पनि हामीमा हुनुपर्छ,” उनले भने । महाधिवेशनको मुखमा आएर संयोजक फेर्दा पार्टीका गतिविधिमा अवरोध सिर्जना भएको र बैशाखमा भनिएको महाधिवेशन नहुने पक्का भएको छ ।
भागबण्डामा पर्दा पनि अध्यक्ष मण्डलका सदस्यहरूले विभिन्न समिति र स्थानहरूमा व्यक्ति छनोट गर्दा भागबण्डामा मान्छे पठाउँदा पनि जातिवाद, नातावाद र द्रव्यवादको प्रभावबाट उम्किन नसकेको राजपाका नेताहरूको भनाइ छ ।
अहिले राजपा र संघीय समाजवादी फोरमबीच एकीकरणको प्रयास शुरू भएको छ । राजपाले सरकार छोडी आए वार्ता गर्ने भनी पठाएको पत्रको जवाफमा फोरमले पहिला एकता गरौं अनि त्यसपछिको विचार छलफलका आधारमा सरकार छोडनु परे निर्णय गरौंला भन्ने आशयको पत्र पठाएको छ ।